Qarammada Midoobay oo dalbanaysa 22 bilyan oo doolar - BBC Somali
Qarammada Midoobay oo dalbanaysa 22 bilyan oo doolar
Qarammada Midoobay ayaa soo bandhigaysa codsigii ugu badnaa abid oo gaaraya 22 bilyan oo doolar, si ay wax uga qabato dhibaatooyinka baahsan ee banniiaadminnimo ee sanadka foodaha inagu soo haya ee 2017-ka.
Qarammada Mioobay waxay sheegtay in lacagtaasi ay daruuri u tahay in gargaar la gaarsiiyo 93 milyan oo ruux oo ku kala nool soddon iyo saddex dal oo daafaha adduunka ku kala yaalla.
Iyada oo Qarammada Midoobay ay dalbanayso lacagta intaas la eg haddana waxay sheegayaan in aysan awoodaynin in ay gargaar gaarsiiyaan malaayiin dad ah oo dhibaato ka soo gaartay collaadaha adduunka oogu xun, kuwaas oo ay ka mid yihiin kuwa ka taagan Suuriya iyo Yemen.
Arrintaas waxay ku sababeeyeen in shaqaalahooda loo diiday in ay gaaraan goobaha ay dadkaasi ku dhibaataysan yihiin.
Wariyaha BBC-da uga soo warrama xarrunta Qarammada Midoobay waxuu sheegayaa in ay sidoo kale jirto walaac ku saabsan dhaqaalihii laga heli jiray qaar ka mid ah deeqbixiyeyaashii joogtaada ahaa, kuwaas oo ay ka mid yihiin Maraykanka iyo Britain oo dib uga fiirsanaya siyaasadahooda gargaarka.